Gottfried Wilhelm Leibniz: biography na ihe ndị ọzọ na sayensị | Network Meteorology
Na blọọgụ a anyị na-ekwukarị banyere ndị sayensị kachasị mkpa na onyinye ha na ụwa sayensị. Agbanyeghị, ndị ọkà ihe ọmụma enyewokwa ọtụtụ onyinye dịka Leibniz. Ọ bụ onye ọkà ihe ọmụma aha ya bụ Gottfried Wilhelm Leibniz na ọ bụkwa onye physics na mgbakọ na mwepụ. O nwere mmetụta dị mkpa na mmepe nke sayensị nke oge a. Na mgbakwunye, ọ bụ otu n'ime ndị nnọchi anya ọdịnala ndị nwere uche nke oge a ebe ọ bụ na ejiri ihe ọmụma ya na mgbakọ na mwepụ na physics nwee ike ịkọwa ụfọdụ ihe okike na mmadụ.
Yabụ, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere akụkọ ndụ Leibniz na ihe ndị ọzọ.
2 Ihe Leibniz na onyinye
3 Nkọwa kachasị oke na mgbakọ na mwepụ
4 Ezigbo uche
5 Nkà ihe ọmụma Leibniz
A mụrụ ya na Julaị 1, 1646 na Leipzig, Germany. O tolitere n'ezinaụlọ Lutheran dị nsọ na njedebe nke afọ 30. Agha a emebiela mba ahụ dum ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe. Kemgbe ọ dị obere, oge ọ bụla ọ gara ụlọ akwụkwọ, ọ bụ ụdị nkuzi nke aka ya kemgbe ọ mụtara ọtụtụ ihe n'onwe ya. Ka ọ na-erule afọ 12, Leibniz amụworị asụsụ Latin n'onwe ya. Ọzọkwa, m na-amụ asụsụ Grik n’otu oge. Ike ịmụta dị oke elu.
Ugbua na 1661 ọ malitere ịzụ na ngalaba iwu na Mahadum Leipzig ebe ọ nwere mmasị karịsịa banyere ụmụ nwoke ndị kpakpando na mbugharị mbụ nke sayensị na nkà ihe ọmụma nke Europe nke oge a. N'ime ndị ikom a gbanwere usoro ihe niile Galileo, Francis Bacon, René Descartes na Thomas Hobbes. N'ime ụfọdụ echiche dị adị n'oge ahụ ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na ụfọdụ echiche Aristotle nwetara.
Mgbe ọ gụchara akwụkwọ iwu ya, ọ nọrọ ọtụtụ afọ na Paris. N'ebe a, ọ malitere ịzụ na mgbakọ na mwepụ na physics. Ke adianade do, enye ama ekeme ndisobo ye mme ọfiọkn̄wed akwaifiọk owo oro ẹketịmde ẹfiọk ini oro ye eke ibat, enye ama esinyụn̄ ekpep kpukpru mbon oro ẹkemade enye. A zụrụ ya na Christian Huygens bụ onye bụ isi ogidi ka o wee nwee ike mechara wepụta echiche banyere usoro iche na njikọta.
Ọ gafere akụkụ dị iche iche nke Europe wee zute ụfọdụ n'ime ndị ọkà ihe ọmụma kacha anọchite anya oge a. Mgbe njem a site na Europe, o guzobere ụlọ akwụkwọ mmuta nke sayensị na Berlin. Agụmakwụkwọ a nwere ọtụtụ ndị na-amụ ọrụ bụ ndị chọrọ ịmatakwu gbasara sayensị. Afọ ndị ikpeazụ nke ndụ ya nọrọ na-anakọta ikpo okwu kasịnụ nke nkà ihe ọmụma ya. Agbanyeghị, ebumnuche a enweghị ike ịga nke ọma. Ọ nwụrụ na Hanover na November 1716.
Ihe Leibniz na onyinye
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi na ọnọdụ nke Leibniz na ụwa nke sayensị na nkà ihe ọmụma. Dị ka ọ dị na ndị ọkà ihe ọmụma ndị ọzọ na ndị ọkà mmụta sayensị nke oge ahụ, Leibniz bụ ọkachamara na mpaghara dị iche iche. Anyi aghaghi iburu n’uche na n’oge ndi a amaghi otutu ihe banyere ihe omumu nile, ya mere na otu onye nwere ike buru onye okacha amara na otutu ebe. Ugbu a, ị ga-ahụ ọkachamara na naanị otu mpaghara yana ọbụlagodi na o siri ike ịmata ozi niile gbasara mpaghara ahụ. Ọ bụkwa na ọnụọgụ nke ihe ọmụma dịnụ na ihe nwere ike ịga n'ihu na-enyocha ihe gbasara ihe dịbu na mbụ bụ ọdịiche dị njọ.
Ike nke ndị ọkachamara na mpaghara dị iche iche nyere ya ohere ịmepụta echiche dị iche iche ma tọọ ntọala maka mmepe sayensị nke oge a. Offọdụ n’ime ihe atụ ndị ahụ dị na mgbakọ na mwepụ na mgbagha na nkà ihe ọmụma. Anyị ga-ekekọrịta ihe onyinye ha bụ:
Nkọwa kachasị oke na mgbakọ na mwepụ
Yana Isaac Newton, a ghọtara Leibniz dịka otu n’ime ndị okike nke kalkulo. Ejiri usoro izizi gbakọọ ihe n'afọ 1675 na Agaara m eji ya chọta mpaghara n'okpuru ọrụ Y = X. N'ụzọ dị otú a iji nwee ike ịmepụta ụfọdụ ọkwa dịka njikọta nke njikọ S wee mee ka Iwu Leibniz pụta, na-abụ kpọmkwem iwu nke ngwaahịa nke usoro iche. O nyekwara aka na ịkọwa ọtụtụ ihe mgbakọ na mwepụ nke anyị na-akpọ infinitesimals na ịkọwapụta ihe niile ha nwere algebraic. Ruo oge ụfọdụ enwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya nke a ga-emegharị ma degharịa na narị afọ nke iri na itoolu.
O nyere aka na ndabere nke epistemology na modal logic. O kwesiri ntukwasi obi na nkuzi nke mgbakọ na mwepu ma nwee ike ịrụ ụka nke ọma na enwere ike ịtụgharị mgbagwoju anya nke echiche mmadụ n'asụsụ nke ịgbakọ. Ozugbo aghotara nghota ndi a, o gha buru oke ihe ngwọta iji dozie esemokwu na esemokwu dị n'etiti ụmụ mmadụ. Maka nke a, a matara ya dịka otu n'ime ndị ọrụ mgbapụta pụtara ìhè n'oge ya, kemgbe Aristotle.
N'ime ihe ndị ọzọ, ọ na-enwe ike ịkọwa njirimara na usoro nke asụsụ dị iche iche dị ka njikọta, nkwekọ, ịtọ, nsonye, ​​njirimara na ihe efu na mkpofu. Ihe niile bara uru bụ ịghọta ma mee ka ezi echiche na ịkwanyere ibe ha ùgwù na-abaghị uru. Ihe ndị a niile bụ otu ụzọ dị mkpa maka nrụpụta epistemic logic na modal logic.
Nkà ihe ọmụma Leibniz
Achịkọtara amamihe Leibniz na ụkpụrụ mmadụ iche iche. O mere ya na 1660s ma na-agbachitere ịdị adị nke otu onye bara uru nke mejupụtara otu n'onwe ya. Nke a bụ n'ihi na ọ ga-ekwe omume ịiche iche na set. Nke a bụ ụzọ izizi echiche German maka monads. Ọ bụ ntụnyere n’ihe ọmụmụ fiziks nke a na-arụ ụka ya na ndị monadị bụ ala nke uche ihe atọm dị n’elu ala. Ha bụ ihe kachasị mkpa nke ụwa niile na ihe na-enye ọdịdị dị oke mkpa site na ihe ndị dị ka ndị a: ndị monads na-adịru ebighi ebi ebe ọ bụ na ha anaghị emebi n'ime ihe ndị ọzọ dị mfe karị, ha bụ mmadụ, na-arụsi ọrụ ike ma na-edobe iwu nke aka ha.
Ekwuru ihe ndia nile dika onye nnọchiteanya nke eluigwe na ala n'onwe ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Leibniz enyela onyinye dị ukwuu na ụwa nke sayensị na nkà ihe ọmụma. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Leibniz na akụkọ ndụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Leibniz Biography